စက်မှုဇုန်များ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော မြေကွက် လွတ်များသည် အမှန်တကယ် ရင်းနှီးမြှု?? - Yangon Media Group
စက်မှုဇုန်များ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသော မြေကွက် လွတ်များသည် အမှန်တကယ် ရင်းနှီးမြှု??
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသော စက်မှုဇုန်များရှိ မြေကွက်လွတ်များသည် အမှန်တကယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများလက်ထဲရှိပါကပို၍အကျိုးရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြန်လည်စိစစ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
စက်မှုဇုန်များတွင် မြေကွက်လွတ်များအား ခြံစည်းရိုးခတ်ထားကာ အဆောက်အအုံ ဆောက်ထားသော်လည်း စက်ရုံလုပ်ငန်းမဟုတ် ခြင်း၊ မြေကွက်လွတ်များအား ပြန်လည်ငှားရမ်း ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ပြီးအဆောက်အအုံများအား ပြန်လည်ငှားရမ်းနေခြင်းများကို စိစစ် တွေ့ရှိကြောင်း တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ လျှပ်စစ်စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က ပြောသည်။ ”ကျွန်မတို့ စက်ရုံအမျိုးမျိုးပေါ့ စားသောက် ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံရှိတယ်။ အထည်အလိပ်ချုပ်တဲ့စက်ရုံရှိတယ်။ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့က လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်၊ မြေကွက်အမျိုး အစားအလိုက် အားလုံးကို စာရင်းကောက်ပါတယ်။ စာရင်းကောက်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ မူလစာချုပ်စာတမ်းတွေအရ ဆောင်ရွက်ထား ခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို စိစစ်ပါတယ်”ဟု ဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် စက်မှုဇုန်များအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် မြေကွက် လွတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါပိုင်ရှင်များထံသို့လည်း ဆက်သွယ်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေမှုကြောင့် တရားဝင်ကြေညာကာ ထုတ်ပြန် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။ ”စက်မှုဇုန်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ မြေကွက် တွေကို အမှန်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေလက်ထဲမှာ ဒီမြေကွက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ပိုအကျိုးရှိ နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့က မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် သိမ်းဆည်းတာလဲ လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေပါပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီမြေကွက်ကို သူအကောင်အထည်ဖော်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က သိမ်းဖို့ဆိုတဲ့အခြေ အနေမျိုးထက်လုပ်ဖို့ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့က ဦးတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က လုပ်စေချင်ပါတယ်။ လုပ်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည်မှာ တိုးတက်မှု တွေ ပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် မြေကွက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မကြာခင် အချိန်အတွင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဟုဆိုသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်မှုဇုန် ၂၉ ဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် မြေကွက်လွတ်များကို ပြန်လည်သိမ်းယူမည်ဆိုခြင်းထက် လုပ်ငန်းများ အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် ပြန်လည်စိစစ်နေခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။ ”ရယူခဲ့တဲ့လူတွေက ဒီမြေကွက်တွေကို တည်ဆောက်မှု လုပ်ခဲ့တဲ့လူလဲရှိတယ်။ မလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေလဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေ၊ မလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကို ပြန်ပြီးစိစစ်တယ်”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။
တေးဂီတ ကုထုံးက စိတ်ရောဂါ လူနာများအား အကျိုးကျေးဇူး ပြုနိုင်ဖွယ်ရှိ